Mugabe – Independent Newspapers Nigeria
Former Zimbabwean President, Robert Mugabe, who ruled Zimbabwe with an iron fist for decades, turned 94 on Wednesday, with no lavish celebrations like previous years. Reports say this will his first birthday since being ousted in a…
Zimbabwe’s former president Robert Mugabe was granted immunity from prosecution, sources close to the negotiations said on Thursday. According to the source, Mugabe was assured that his safety would be protected in his home country as part…
Jubilation As Mugabe Resigns After 37-Year Rule
Robert Mugabe on Tuesday resigned as president of Zimbabwe after he wrote a formal letter to the country’s parliament communicating his desire to step down. In a letter read on the floor of a joint session of the Zimbabwean parliament…
President Robert Mugabe of Zimbabwe on Friday praised China for maintaining friendly relations with Africa and the developing world at large, as well as for providing assistance to the continent. In an interview with Chinese media, Mugabe…